सामुदायिक वनमा तीव्र फडानी, किन काेही बाेल्दैनन् ? « News24 : Premium News Channel
सामुदायिक वनमा तीव्र फडानी, किन काेही बाेल्दैनन् ?
मुगु, ६ माघ । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं १४ मा रहेको चंंखेली र मिन डाडा सामुदायिक वन तीव्र रुपमा फडानी भएको छ । तर सरोकारवाला निकाय भने बेखबर भएर बसेका छन् ।
बाम, फैपाटा, दर्खे, नार्फालगायत बस्तीका ३ सयभन्दा बढी घर परिवारले प्र्रयोग गर्दै आइरहेको मिनडाँडा सामुदायिक वन र चंंखेली सामुदायिक वनमा तीव्र फडानी गरेर पछिल्ला केही दिनहरुका स्याउ उत्पादन बगैँचा, अन्नखेतीका लागि जग्गा बनाउने र नयाँ घर बनाउने होड नै चलेको छ । नियम–कानुनविपरीत हाते आरा प्रयोग गरी धमाधम वन फडानी भैरहेको छ ।
स्थानिय जनप्रतिधिहरुले वन फडानी भएको देखे पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् । त्यसैले त फडानी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नचाहेको र न्युज २४ प्रतिनिधिले सम्पर्क गर्दा क्यामरामा पनि बोल्न नमानेको देखिएको छ ।
सामुदायिक वनको नियमअनुसार समितिले काम नगर्दा वन फडानी भएको बढेको हो । फडानी गर्नेमा आफ्नै मान्छे संलग्न रहेको बुझेर समिति नै चुप लागेर बसेको छ । उता डिभिजन वन कार्यालयबाट पनि कुनै कर्मचारी यस क्षेत्रमा निगरानी गर्न नआएको एक वर्षभन्दा बढी भैसकेको छ ।
शम्भू सदा र बीरेन्द्र यादवको परिवारलाई प्रदेश सरकारले पाँच-पाँच लाख दिने
बलात्कारी कोरोनाभन्दा ठूलाे भाइरस : सांसद् शारदादेवी भट्ट
खेल क्षेत्रमा मेरो भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ : सांसद रायमाझी
क्वारेन्टाइनबाट ‘डर लाग्यो हजुर’ कोठमा चुक्कुल छैन भनेर फाेन आउँछ : सांसद विमला
जेठ २३ गते यूएईबाट आएका एक महिला र एक पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि
राणाकालमा नै बनेको पाल्पाको बसपार्क साँघुरो भएपछि अब नयाँ निर्माण गरिने
access_time 2:04 pm
access_time 1:55 pm
access_time 1:42 pm
घनश्याम मिश्र जनकपुरधाम, ३ असार । प्रदेश दुई सरकारले शम्भू सदा र बीरेन्द्र यादवको परिवारलाई
काठमाडौं, ३ असार । सांसदले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको जोखिमका सन्दर्भमा कैलालीको क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलामाथि बलात्कारमा
काठमाडाैं, ३ असार । राष्ट्रियसभाका सांसद रमेशजंग रायमाझीले खेल क्षेत्रमा युवाहरूकाे भविष्य सुनिश्चित नभएकाे बताउनुभएकाे